Famonjena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Jesosy no mpanelanelana antsika
Deutsch Afrikaans Shqip አማርኛ العربية Հայերեն Azərbaycan dili Euskara Беларуская мова বাংলা Bosanski Български Català Cebuano Chichewa 简体中文 繁體中文 Corsu Hrvatski Čeština‎ Dansk Nederlands English Eesti Filipino Suomi Français Galego ქართული Ελληνικά Kreyol ayisyen Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית हिन्दी Magyar Íslenska Bahasa Indonesia Gaelige Italiano 日本語 Basa Jawa ಕನ್ನಡ Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ 한국어 كوردی‎ Кыргызча ພາສາລາວ Latin Latviešu valoda Lietuvių kalba Македонски јазик Malagasy Bahasa Melayu മലയാളം Maltese Te Reo Māori मराठी Монгол ဗမာစာ नेपाली Norsk bokmål پښتو فارسی Polski Português ਪੰਜਾਬੀ Română Русский Samoan Gàidhlig Српски језик Sesotho سنڌي සිංහල Slovenčina Slovenščina Afsoomaali Español Basa Sunda Kiswahili Svenska Тоҷикӣ தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe Українська اردو O‘zbekcha Tiếng Việt Cymraeg Yorùbá Zulu
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny famonjena
Ny famonjena dia ny famerenana amin’ny laoniny ny fiombonan’ny olombelona amin’Andriamanitra sy ny fanavotana ny voary rehetra amin’ny fanandevozan’ny ota sy ny fahafatesana. Tsy ho an’ny fiainana ankehitriny ihany no omen’Andriamanitra famonjena, fa ho an’ny mandrakizay ho an’ny olona rehetra izay manaiky an’i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy. Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny famonjena, natao tamin’ny alalan’ny fahasoavana, nomena tamin’ny finoana an’i Jesosy Kristy, fa tsy mendrika ny tombontsoa manokana na ny asa tsara. (Efesiana 2,4- enina ambin'ny folo; 1. Korintiana 1,9; Romana 8,21- enina ambin'ny folo; 6,18.22-23)
Famonjena - asa famonjena!
Ny famonjena, fanavotana fanavotana. Ny manatona ny teny hoe "famonjena" dia mila mahafantatra telo: inona ny olana; izay nataon'Andriamanitra momba izany; ary ny fomba tokony handraisantsika izany.
Inona ny lehilahy
Rehefa namorona ny olona Andriamanitra dia namorona azy “tahaka ny endriny”, ary nataony hoe “tsara indrindra” ny zavaboariny (1. Mosesy 1,26-27 sy 31). Zavaboary mahagaga ny olona: vita tamin'ny vovoka, nefa noforonin'ny fofonain'Andriamanitra (1. Mosesy 2,7).
Ny "endrik'Andriamanitra" mety misy ny faharanitan-tsaina, ny hery namoronana ary ny herisetra amin'ny famoronana. Ary ny fahaizana mamorona fifandraisana sy mandray fanapahan-kevitra ara-pitondrantena. Amin'ny lafiny sasany, dia mitovy amin'Andriamanitra Izy, satria manana zavatra tena manokana ho antsika, zanany, Andriamanitra.
Ny bokin’i Mosesy dia milaza amintsika fa ny olombelona voalohany dia nanao zavatra izay nandraran’Andriamanitra azy ireo (1. Mosesy 3,1-13). Ny tsy fankatoavan’izy ireo dia nampiseho fa tsy natoky an’Andriamanitra izy ireo; ary fanitsakitsahana ny fitokisany azy izany. Ny tsy finoana dia nanarona ny fifandraisana ary tsy nahavita izay tian’Andriamanitra ho azy ireo. Vokatr’izany, dia namoy ny sasany tamin’ny fitoviany tamin’Andriamanitra izy ireo. Ny vokany, hoy Andriamanitra, dia: ady, fanaintainana ary fahafatesana (and. 16-19). Raha tsy te hanaraka ny toromariky ny Mpamorona izy ireo, dia tsy maintsy nandalo ny lohasahan-dranomaso.
Mendri-kaja sy ratsy fanahy koa ny olombelona. Afaka manana idealy ambony isika ary mbola barbariana. Tahaka an'Andriamanitra isika nefa tsy misy an'Andriamanitra amin'ny fotoana iray ihany. Tsy "ao amin'ny fanahin'ny mpamorona" intsony isika. Na dia “nanimba” ny tenantsika aza isika, dia mbola heverin’Andriamanitra ho mitovy amin’ny endrik’Andriamanitra ihany isika (1. Mosesy 9,6). Mbola misy ny fahafahana ho tonga tahaka an’Andriamanitra. Izany no tian’Andriamanitra hamonjena antsika, izany no antony itiavany hanavotra antsika sy hamerina ny fifandraisany amintsika.
Tian'Andriamanitra hanome antsika fiainana mandrakizay, tsy misy fanaintainana, fiainana tsara miaraka amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay avy. Tiany ho ampiasaina tsara ny faharanitan-tsaintsika, ny famoronana ary ny tanjantsika. Tiany ho toa azy isika, fa tsara noho ny olona voalohany isika. Izany no famonjena.
Ny fon'ny drafitra
Ka mila famonjena isika. Ary namonjy antsika Andriamanitra - kanefa tamin'ny fomba izay tsy nisy nantenaina akory. Tonga zanak'olombelona ny Zanak'Andriamanitra, niaina fiainana tsy misy ota ary namono azy izahay. Ary izany - hoy Andriamanitra - no famonjena ilaintsika. Mampihomehy! Voavonjy amin'ny traboina iray isika. Lasa nofo ny Mpamorona antsika hany ka afaka misolo ny fanasaziana antsika. Natsangan'Andriamanitra Izy, ary tamin'ny alalan'i Jesosy dia nampanantena Izy fa hitondra antsika amin'ny fitsanganana.
Ny fahafatesan'i Jesôsy sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia maneho sy manao izay hahafatesan'ny maty sy ny fitsanganan'ny olombelona rehetra. Ny fahafatesany no mendrika ny tsy fahombiazantsika sy ny hadisoantsika, ary amin'ny maha-Mpamorona antsika, dia nanavotra ny fahadisoana rehetra nataontsika. Na dia tsy mendrika ny ho faty aza izy, dia nanaiky an-tsitrapo ho solontsika.
Jesosy Kristy dia maty ho antsika ary natsangana ho antsika koa (Romana 4,25). Ny tenantsika taloha dia niara-maty taminy, ary nisy olom-baovao niara-nitsangana taminy (Romana 6,3-4). Tamin’ny sorona tokana no nanefany ny sazy noho ny fahotan’ny “izao tontolo izao” (1. Johannes 2,2). Efa vita ny fandoavana; ny fanontaniana ankehitriny dia ny fomba handraisantsika soa avy amin’izany. Ny fandraisantsika anjara amin’ilay drafitra dia amin’ny alalan’ny fibebahana sy ny finoana.
Tonga hiantso ny olona hibebaka i Jesoa (Lio 5,32); (Ao amin’ny Lotera, ny hoe “fibebahana” no tena adika hoe “fibebahana”). Niantso ny fibebahana sy ny fiovam-po amin’Andriamanitra i Petera mba hahazoana famelan-keloka (Asa 2,38; 3,19). Nampirisika ny olona “hibebaka amin’Andriamanitra” i Paoly ( Asan’ny Apostoly 20,21:1 , Baiboly Elberfeld ). Ny fibebahana dia midika hoe: miala amin’ny fahotana, mitodika amin’Andriamanitra. Nambaran’i Paoly tamin’ny Ateniana fa tsy noraharahain’Andriamanitra ny fanompoan-tsampy tamin’ny tsy fahalalana, fa ankehitriny kosa “dia mandidy ny olona Izy hibebaka amin’ny tanjona rehetra.” ( Asa.7,30). Lazao hoe: Tokony hiala amin'ny fanompoan-tsampy ianao.
Nanahy i Paoly fa mety tsy hibebaka amin’ny fijangajangana ny Kristianina sasany any Korinto (2. Korintiana 12,21). Ho an’ireo olona ireo, ny fibebahana dia midika fahavononana hiala amin’ny fijangajangana. Araka ny voalazan’i Paoly, ny olona dia tokony “hanao ny asa marina momba ny fibebahana”, izany hoe hanaporofo ny maha-azo itokiana ny fibebahany amin’ny ataony ( Asa.6,20). Manova ny saintsika sy ny fitondran-tenantsika isika.
Anisan’ny fototry ny fampianarantsika ny “fiala amin’ny asa maty” (Hebreo 6,1). Tsy midika akory izany fa tonga lafatra hatrany am-boalohany - tsy lavorary ny Kristianina (1 Jao1,8). Ny fibebahana dia tsy midika hoe efa tratra ny tanjona, fa efa manomboka mizotra amin’ny lalana tokony haleha.
Tsy velona ho an’ny tenantsika intsony isika, fa ho an’i Kristy Mpamonjy (2. Korintiana 5,15; 1. Korintiana 6,20). Hoy i Paoly: “Tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho amin’ny fahalotoana sy ny tsy fahamarinana ho amin’ny tsi-fahamarinana vaovao mandrakizay, dia mba omeo kosa ankehitriny ny momba ny tenanareo ho amin’ny fanompoana ny fahamarinana, mba ho masina” (Romana). 6,19).
Ny fiantsoana ny olona hibebaka fotsiny dia tsy mbola mahavonjy azy ireo amin'ny hadisoany. Ny olona dia nantsoina hankatò nandritra ny an'arivony taona, nefa mbola mila famonjena. Singa faharoa no takiana ary izany ny finoana. Ny Testamenta Vaovao dia milaza zavatra betsaka kokoa momba ny finoana noho ny momba ny fibebahana (fivalozana) - ny teny hoe finoana dia matetika mihoatra ny valo heny.
Izay mino an’i Jesosy dia hahazo famelan-keloka (Asa 10,43). "Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao!" (Asan’ny Apostoly 16,31.) Ny Filazantsara dia “herin’Andriamanitra izay mamonjy izay rehetra mino azy.” ( Romana 1,16). Ny Kristianina no anaram-bositra hoe mpino fa tsy mibebaka. Ny toetra mampiavaka azy dia ny finoana.
Inona no dikan'ny hoe "mino" - ny fanekena ny zava-misy sasany? Ny teny grika dia mety hidika izany karazana finoana izany, fa amin'ny ankabeazany dia manana ny dikany lehibe "fahatokisana" izy. Rehefa niantso antsika hino an'i Kristy i Paoly dia tsy ny zava-misy no tena resahiny. (Na ny devoly aza mahalala ny zava-misy momba an'i Jesosy, nefa mbola tsy voavonjy.)
Raha mino an'i Jesoa Kristy isika, dia matoky azy. Fantatsika fa tsy mivadika sy atokisana izy. Afaka miantehitra aminy isika hikarakara antsika, hanome antsika ny zavatra nampanantenainy. Afaka matoky isika fa hamonjy antsika amin'ny olana ratsy indrindra amin'ny olombelona. Raha miantehitra aminy amin'ny famonjena isika, dia miaiky fa mila fanampiana isika ary afaka manome izany antsika.
Ny finoana toy izany dia tsy mahavonjy antsika - tsy maintsy mino azy fa tsy zavatra hafa. Matoky azy isika ary mamonjy antsika Izy. Rehefa matoky an'i Kristy isika dia mitsahatra tsy matoky ny tenantsika. Na dia miezaka mitondra tena tsara aza isika dia tsy mino fa ny fiezahantsika hamonjy antsika ("fiezahana mafy" tsy nahatonga olona tonga lafatra mihitsy). Etsy ankilany, tsy kivy isika rehefa tsy mahomby ny ezaka ataontsika. Matoky isika fa hitondra famonjena ho antsika Jesosy, fa tsy hoe hiasa ho azy isika. Miloka aminy isika fa tsy amin'ny fahombiazantsika na tsy fahombiazantsika manokana.
Ny finoana no fitaomana hibebaka. Raha matoky an'i Jesosy ho Mpanavotra antsika isika; rehefa tsapantsika fa tia antsika loatra Andriamanitra ka nandefa ny Zanany ho faty ho antsika; rehefa fantatsika fa maniry ny tsara indrindra ho antsika izy dia manome fahavononana hiaina ho azy sy hampifaly azy. Manapa-kevitra izahay: atsipintsika ny fiainana tsy misy antony sy mahasosotra izay nitarihanay sy ankatoavintsika ny dikany nomen'Andriamanitra, ny torolalana nomen'Andriamanitra sy ny fandaharana.
Ny finoana - izany no fanovana anatiny rehetra manan-danja. Ny "finoantsika dia tsy" miasa "ho antsika ary tsy manampy na inona na inona tamin'ny" niasa "nataon'i Jesosy ho antsika. Ny finoana dia fanekena tsotra fotsiny ny mamaly izay nataony. Isika dia toy ny andevo miasa ao anaty lavaka tanimanga, andevo izay lazain'i Kristy hoe: "Novidiko maimaimpoana ianao." Malalaka ny hipetraka amin'ny lavaka tanimanga na hatokisana azy sy handao ny lavaka tanimanga isika. Tonga ny fanavotana; Anjarantsika ny manaiky azy ireo sy hanao zavatra mifanaraka amin'izany.
Fanomezana avy amin’Andriamanitra amin’ny heviny ara-bakiteny ny famonjena: omen’Andriamanitra antsika izany amin’ny alalan’ny fahasoavany, amin’ny fahalalahan-tanana. Tsy mendrika izany isika na inona na inona ataontsika. “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; fa tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra, tsy avy amin’ny asa, mba tsy hisy hirehareha.” (Efesiana) 2,8-9). Fanomezana avy amin’Andriamanitra koa ny finoana. Na dia mankatò tanteraka aza isika manomboka izao, dia tsy mendrika ny hahazo valisoa7,10).
Noforonina ho amin’ny asa tsara isika (Efes 2,10), fa ny asa tsara dia tsy mahavonjy antsika. Manaraka ny fahazoana famonjena izy ireo, nefa tsy mahavita izany. Araka ny voalazan’i Paoly hoe: Raha misy olona ho tonga amin’ny famonjena amin’ny fitandremana ny lalàna, dia ho maty foana Kristy (Galatianina). 2,21). Ny fahasoavana dia tsy mamela antsika hanota, fa nomena antsika kosa raha mbola manota (Romana 6,15; 1Jao1,9). Rehefa manao asa tsara isika, dia tsy maintsy misaotra an’Andriamanitra, fa ataony ao anatintsika izany (Galatiana 2,20; Filipianina 2,13).
Andriamanitra dia “namonjy antsika sy niantso antsika tamin’ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fisainany sy ny fahasoavany” (2 Tim.1,9). “Namonjy antsika Andriamanitra, tsy noho ny asan’ny fahamarinana izay nataontsika, fa noho ny famindram-pony” (Titosy). 3,5).
Ny fahasoavana no ivon’ny filazantsara: mahazo famonjena ho fanomezana avy amin’Andriamanitra isika, fa tsy amin’ny asantsika. Ny filazantsara dia “ny tenin’ny fahasoavany” (Asa 14,3; 20,24). Mino isika fa “ny fahasoavan’i Jesosy Tompo no hamonjena antsika” (Asan’ny Apostoly 15,11). “Tonga marina tsy misy antony isika noho ny fahasoavany amin’ny fanavotana izay tonga amin’ny alalan’i Kristy Jesosy” (Romana 3,24). Raha tsy misy ny fahasoavan’Andriamanitra dia ho tsy afa-manoatra amin’ny famindram-pon’ny fahotana sy ny fanamelohana isika.
Mijoro na mianjera amin’izay nataon’i Kristy ny famonjena antsika. Izy no Mpamonjy, izay mamonjy antsika. Tsy afaka mirehareha ny amin’ny fankatoavantsika isika, satria tsy lavorary foana izany. Ny hany azontsika reharehantsika dia ny nataon'i Kristy (2. Korintiana 10,17-18) - ary nataony ho an'ny rehetra izany, fa tsy ho antsika ihany.
Ny famonjena dia voalaza ao amin'ny Baiboly amin'ny lafiny maro: ny vidim-panavotana, ny fanavotana, ny famelan-keloka, ny fampihavanana, ny fahazazana, ny fanamarinana, sns. Ny antony: mahita ny olany amin'ny hazavana samihafa. Raha mahatsapa maloto ianao dia manolotra fanadiovana anao i Kristy. Raha mahatsapa ho andevo ianao dia afaka mividy tapakila; izay mahatsapa fa meloka dia mamela azy.
Ireo izay mahatsiaro ho tafasaraka ka miala aoriana dia omena fampihavanana sy fisakaizana. Ireo mahatsapa ho tsy misy vidiny dia manome lanja vaovao sy azo antoka. Ireo izay tsy mahatsapa fa anisan'izy ireo na aiza na aiza dia manome famonjena amin'ny fahazazana sy lova. Raha mahatsapa ianao fa tsy manana tanjona dia omena azy sy tanjona ny dikany. Manome fitsaharana ho an'ny reraka Izy. Manome fiadanana ho an'ny matahotra. Izany rehetra izany dia famonjena, ary mbola betsaka kokoa.
Andeha hodinihintsika akaiky ny fehezan-teny tokana: fanamarinana. Avy amin'ny sehatra ara-dalàna ny teny grika. Ny voamarina dia voalaza fa "tsy meloka". Maivamaivana izy, averina, raikitra, esorina. Rehefa manamarina antsika Andriamanitra, dia nambarany fa tsy anjarantsika intsony ny fahotantsika. Efa nisy ny fanamboarana ny trosa.
Raha manaiky isika fa maty ho antsika Jesosy dia raha miaiky isika fa mila mpamonjy, raha fantatsika fa mendrika ny fanasaziana ny fahotantsika ary i Jesoa no namoaka ny sazy ho antsika, dia manam-pinoana isika ary manome toky antsika Andriamanitra. voavela heloka izahay.
Tsy misy olona azo hamarinina - ambara ho marina - amin'ny "asan'ny lalàna" (Romana 3,20) satria tsy mahavonjy ny lalàna. Fenitra tsy tanintsika fotsiny izany; Tsy misy olona manaraka izany fenitra izany (and. 23). Andriamanitra dia manamarina ny “izay avy amin’ny finoana an’i Jesosy” (and. 26). Manjary marina ny olona “raha tsy amin’ny asan’ny lalàna, raha tsy amin’ny finoana” (and. 28).
Mba hampisehoana ny fotopoto-pitsipika momba ny “fanamarinana amin’ny finoana”, dia nanonona an’i Abrahama toy izao i Paoly: “I Abrahama dia nino an’Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany.” ( Romana. 4,3, teny nalaina avy amin'ny 1. Mosesy 15,6). Satria natoky an’Andriamanitra i Abrahama, dia nataon’Andriamanitra ho marina izy. Efa ela be talohan’ny nanorenana ny Lalàna, dia porofo izany fa fanomezana avy amin’Andriamanitra ny fanamarinana, noraisina tamin’ny finoana, fa tsy tamin’ny fitandremana ny lalàna.
Ny fanamarinana dia mihoatra noho ny famelan-keloka, mihoatra noho ny fanadiovana ny kaonty trosa. Ny fanamarinan-tena dia midika hoe: manomboka izao dia heverina ho marina isika, mijoro eo amin'ny maha-olona nanao ny tsara. Ny fahamarinantsika tsy avy amin’ny asantsika, fa avy amin’i Kristy (1. Korintiana 1,30). Amin’ny alalan’ny fankatoavana an’i Kristy, hoy i Paoly, dia tonga olo-marina ny mino (Romana 5,19).
Na dia ny “ratsy fanahy” aza dia “hisaina ho fahamarinana” ny finoany (Romana 4,5). Ny mpanota izay matoky an’Andriamanitra dia marina eo imason’Andriamanitra (ary noho izany dia horaisina amin’ny Fitsarana Farany). Na iza na iza matoky an’Andriamanitra dia tsy haniry ny ho ratsy fanahy intsony, fa izany no vokany, fa tsy anton’ny fahazoana ny famonjena. Fantatr’i Paoly sy nanantitrantitra hatrany hatrany fa “tsy ny asan’ny lalàna no anamarinana ny olona, ​​fa amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy” (Galatiana). 2,16).
Ny olona sasany mino ny indray mipi-maso. Misy zavatra manindry ny atidohany, misy jiro mirehitra ary milaza izy ireo fa Jesosy no Mpamonjy azy ireo. Ny sasany tonga mino amin'ny fomba miandalana kokoa, mahatsapa miadana fa mba hahazoana famonjena dia tsy miankina amin'ny tenany intsony, fa amin'i Kristy.
Na izany na tsy izany, ny Baiboly dia milaza azy io ho fahateraham-baovao. Raha mino an’i Kristy isika dia nateraka indray ho zanak’Andriamanitra (Jao 1,12-13; Galatianina 3,26; 1Jao5,1). Manomboka miaina ao anatintsika ny Fanahy Masina (Jaona 14,17), ary Andriamanitra dia mametraka tsingerina vaovao amin’ny famoronana ao anatintsika (2. Korintiana 5,17; Galatianina 6,15). Maty ny toetra taloha, manomboka tonga ny olona vaovao (Efesiana 4,22-24) - Manova antsika Andriamanitra.
Ao amin'i Jesosy Kristy - ary ao amintsika raha mino azy isika - nofoan'Andriamanitra ny vokatry ny fahotan'ny olombelona. Miaraka amin'ny asan'ny Fanahy Masina ao amintsika, dia misy ny olombelona vaovao. Tsy lazain'ny Baiboly amintsika ny fomba nitrangan'izany; izany dia milaza amintsika fotsiny fa mitranga izany. Manomboka amin'ity fiainana ity ny dingana ary hovitaina amin'ny manaraka.
Ny tanjona dia ny hahatonga antsika hitovy bebe kokoa amin’i Jesoa Kristy. Izy no endrik'Andriamanitra tonga lafatra (2. Korintiana 4,4; Kolosiana 1,15; Hebreo 1,3), ary tsy maintsy miova ho tahaka Azy isika (2. Korintiana 3,18; Gal4,19; Efesianina 4,13; Kolosiana 3,10). Tokony ho tonga tahaka azy amin’ny fanahy isika – amin’ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, fanetren-tena ary toetran’Andriamanitra hafa. Izany no ataon’ny Fanahy Masina ao anatintsika. Manavao ny endrik’Andriamanitra Izy.
Ny famonjena dia lazaina ihany koa ho fampihavanana - ny famerenana amin’ny laoniny ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra (Romana 5,10- enina ambin'ny folo; 2. Korintiana 5,18-21; Efesianina 2,16; Kolosiana 1,20-22). Tsy manohitra na tsy miraharaha an’Andriamanitra intsony isika fa tia azy. Avy amin'ny fahavalo no lasa mpinamana. Eny, amin’izay mihoatra noho ny namana, Andriamanitra dia milaza fa handray antsika ho zanany Izy (Romana 8,15; Efesianina 1,5). Isika dia anisan’ny fianakaviany manana zo sy adidy ary lova be voninahitra (Romana 8,16-17; Galatianina 3,29; Efesianina 1,18; Kolosiana 1,12).
Amin’ny farany dia tsy hisy fanaintainana na fijaliana intsony1,4), izay midika fa tsy misy manao fahadisoana intsony. Tsy hisy ota intsony, ary tsy hisy fahafatesana intsony (1. Korintiana 15,26). Mety ho lavitr’ezaka izany tanjona izany raha dinihina ny toe-piainantsika ankehitriny, saingy manomboka amin’ny dingana iray ny dia – dia ny fanekena an’i Jesoa Kristy ho Mpamonjy. Hamita ny asa natombony ao anatintsika i Kristy (Filipiana 1,6).
Ary avy eo dia ho lasa tahaka an'i Kristy bebe kokoa isika (1. Korintiana 15,49; 1. Johannes 3,2). Tsy mety maty, tsy mety maty, be voninahitra ary tsy misy ota isika. Hanana hery mihoatra ny natoraly ny vatantsika ara-panahy. Hanana fahavitrihana, faharanitan-tsaina, fahaiza-mamorona, tanjaka ary fitiavana izay tsy ho nofinofisintsika ankehitriny. Ny endrik’Andriamanitra, izay voaloton’ny fahotana indray mandeha, dia hamirapiratra amin’ny famirapiratana lehibe kokoa noho ny teo aloha.